Iholide lomndeni olushibhile e-Sun City
6 DayIholide lomndeni olushibhile e-Sun City
Leli Phakheji le-Sun City Family Pacordable elifanelekayo elingama-6 lilungele imindeni efuna ukudala izinkumbulo ezingapheliyo, ukuzibandakanya emisebenzini yamanzi, izinsalela ze-wildlife safari kanye nemikhosi yomndeni ejabulisayo. Izindaba ezinhle. .. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12. ... hlala mahhala!
Leli Phakheji le-Sun City Family Holiday elingenakunakekelwa yi-Sun City nePilanesberg National Park elingenakusihlwa eliku-6 lizokuthatha uhambo lomndeni olukhunjulwayo. Le phakheji elisezingeni eliphezulu le-Sun City lilungele imindeni efuna ukuphunyuka iziphazamiso zezwe lanamuhla ukuzitholela esikhathini semindeni yekhwalithi ngaphandle kokuphula ibhange.
Hlola i-Sun City Resort ekhangayo nomndeni wakho. Azikho izinkambo ezihleliwe nemisebenzi enika wena nomndeni wakho inkululeko yokuhlola le ndawo yokunethezeka ngezinga lakho siqu. Abathandi bezilwane bezokwelapha, kunamathuba amaningi okubuka umdlalo e-malava-mahhala i-Pilanesberg National Park. Imisebenzi yezingane ezikhethekile izokhipha izinkanuko zezingane zakho zezilwane zasendle zase-Afrika nemvelo.
Usuku 1: e-Sun City
Sebenzisa isikhathi sokungcebeleka komndeni wakho e-Valley of the Waves noma ukuhlola indawo yokubhuka. Esigodini se-Waves wena nomndeni wakho ningathola iLagoon Yokugwedla - i-pool ye-waves yamamitha ayizi-6 500 kanye neBridge of Time eqhuma njalo ngehora.
Ngemuva kwe-ntambama elangeni, freshen up futhi uchithe kusihlwa nomndeni wakho esikhungweni sezokuzijabulisa. Emibhangqweni efuna ukuchitha isikhathi sekhwalithi yedwa kwikasinosi noma emibonweni ye-cabaret, kunezinsizakalo zokuthola izingane ezitholakala eShot City resort.
Usuku 2 - 3: e-Sun City
Vuka uphinde ujabulele i-buffet yokudlela yasekuseni ehle kakhulu. Wena nomndeni wakho niyoba nenkululeko yokuchitha ntambama ngesivinini sakho e-Sun City Resort.
Veza emndenini womndeni ohlangene e-Water Wonderland bese uqala ukukhunjulwa kwemikhumbi yomkhumbi womndeni.
Thola ukuxubha kwe-adrenaline ngemisebenzi emanzini ejabulisayo, kufaka phakathi ukuhamba nge-jet-skiing, i-parasailing, i-waterkiing noma i-wakeboarding, i-tube rides, ne-wake-snake adventures.
Usuku4:i- Pilanesberg National Park
Ngemuva kokudla kwasekuseni kwakho, ujabulele ukuhamba ngokuya endaweni yakho yokuhlala e-Pilanesberg National Park mahhala. Abanakekeli bayokwamukela futhi bakusize wena nomndeni wakho ekamelweni lakho lomndeni.
Hlala futhi ulungele umkhumbi womndeni ongawubaleki ePilanesberg National Park. Ngomhlahlandlela onolwazi emotweni evulekile, uzokwazi ukuhamba emdlalweni wezemidlalo ukulandelela inqwaba yemidlalo kuhlanganise ne-Big Five.
Ngemuva kwentambama ejabulisayo yokubukwa kwemidlalo, thokozela isidlo esiphundu futhi ujabulele ekuqaliseni izinkanyezi nabantwana bakho.
Usuku-5: e-Pilanesberg National Park
Qala usuku lwakho nge-English Full Breakfast Breakfast futhi ujonge ukubukwa okubukeka kahle. Sebenzisa isikhathi sakho ntambama ngokuzilibazisa ngenkathi izingane zakho zisesimweni se-Junior Rangers noma endaweni yokudlala.
Jabulela umndeni ojabulisayo ohlanganisa ama-putt putt, ama-tennis etafuleni, noma ama-safaris ehamba ngamahlathi. Joyina umndeni wakho kwenye i-drive ye-epic game nge-Pilanesberg National Park ukulandelela umdlalo omkhulu futhi endleleni yakho emuva uma ubumnyama buwa, thola izilwane ezimbalwa zebusuku.
Sebenzisa ubusuku bakho bokugcina nomndeni wakho ozungezwe izibani bese udla ukudla okumnandi, ngenkathi ulalela imisindo namakholi avela ehlathini lase-Afrika.
Usuku- 6: i-Pilanesberg National Park - eGoli
Ngemuva kokudla kwasekuseni okunethezeka kwezwekazi, ujabulele ukubuyela emuva eGoli.Ngesikhathi sokushayela kwakho okubukeka kahle, cabanga ngesipiliyoni esimnandi onaso nabantwana bakho.
Ukulala kwezintathu zokuhlala ebusuku emndenini eCabana Hotel, kubandakanya kwasekuseni
Ukulala okungu-2 ebusuku ku-malaria-free safari lodge kufaka phakathi kwasekuseni nasekuseni
1 drive yemoto yansuku zonke ngenkathi uhlala e-safari lodge